Izindaba - Khetha umshini wemaski okufanele wazi la maphuzu alandelayo
Kulezi zinsuku, abantu abaningi ngokwengeziwe babona imakethe yamamaski avikelayo, futhi futhi babona umkhuba wentuthuko yesikhathi esizayo. Imakethe inkulu kakhulu. Bayanda abantu abakhetha ukuthenga okokusebenza kwemishini ukuze babe ngabenzi bemaski. Ngabe unamathuba alandelayo ongawacabanga lapho ukhetha amaski?
1. Kulezi zinsuku, osomabhizinisi kanye nabangane abanamabhizinisi bonke bakhetha ukuba ngabakhiqizi bemaski njengokugcinwa komthetho. Kungani sisho lokhu? Ngokuyinhloko kungenxa yokungcola kwemvelo. Manje, iningi labantu lifaka izifihla-buso lapho liphuma. Abanye abantu abadumile babika ukuthi imboni yemaski izoba yanda ngokwengeziwe. Kulezi zici ezingenhla, kubuye kubeke isisekelo esihle somkhakha wesifi esizayo ukuze kwandiswe ukukhiqizwa kwamamaski futhi kuhlangatshezwane nezidingo zemakethe, abenzi bemaski bamukele imishini nemaskhi ehlukahlukene yokujoyina lo mkhiqizo.
2. Ukusetshenziswa kwale mishini yokukhiqiza nemishini akukwazi ukonga abasebenzi kuphela, konga isikhathi sokukhiqiza nokusetshenziswa kwempahla, kepha futhi nokuqinisekisa ukukhiqizwa okusebenzayo, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo njalonjalo. Kuletha indawo ehlukile ekukhiqizweni okwenziwa ngezandla ukukhiqizwa kwebhizinisi labo, ngakho-ke kuyinqubekela phambili enkulu yabakhiqizi bemaski. Yize ukukhiqizwa kwamamaski kungabona ukukhula okusheshayo nokuthuthuka kwamabhizinisi ngale mishini, kepha ngamabhizinisi amaningi aya ngokujoyina umkhakha wemishini yokulungisa, uma abakhiqizi bemaski befuna ukuwina, kufanele bathuthukise ukuncintisana kwamabhizinisi ngokukhetha okuhle kakhulu.
3. Noma yiliphi ibhizinisi elingaqhuba inhlokodolobha izokhawulelwa, futhi noma ukusetshenziswa kwemishini yemaski kungaba ukukhiqiza okuhle kakhulu, kepha ukusetshenziswa kwemishini nokukhiqizwa kwemishini kunqunyelwe. Lapho ibhizinisi likhula likhula futhi likhula, yimishini embalwa kuphela enganele. Ukunweba ukutshalwa kwemali kumishini yemaskhi kungadala inzuzo ethe xaxa, futhi ukuthenga imishini ethe xaxa ngemali elinganiselwe akulethi nzuzo enomkhawulo, okulusizo olukhulu ekuthuthukisweni kwamabhizinisi.
Manje, okudingwa kakhulu yimboni yemaski ukuthi izimali zosomabhizinisi zilinganiselwe. Ukuze babuyisele ngokushesha izindleko futhi bazilethele inzuzo ethe xaxa, bazokhetha ukuthenga ukukhiqizwa kwemishini. Ukubekwa ngesandla kungonga imali eningi, futhi ukusebenza kahle nakho kuphezulu kakhulu. Intuthuko esheshayo ilungele ukuqala kokuqala, futhi abakhiqizi bemaski abakhulu bazothenga imishini eminingi Khulisa isabelo semakethe, balethe inzuzo ephezulu nentuthuko engcono kumabhizinisi.
non nokwelukiweyo imaski ukwenza umshini, kuhlinzwa ubuso imaski ukwenza umshini, hose clamping umshini, non nokwelukiweyo ubuso imaski ukwenza umshini, umshini wesifihli sobuso, imaski yokuhlinzwa okwenza umshini,